रङ्गशाला बनाउन ठेलामा मःम पसल ! « Bagmati Online
रङ्गशाला बनाउन ठेलामा मःम पसल !
भरतपुर– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहयोग पुर्‍याउन ठेला पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। धुर्मुश सुन्तली फाउण्डेशनले पश्चिम चितवनको रामपुरमा रङ्गशाला बनाउँदै छ। रङ्गशालाको अवलोकन गर्न आउनेलाई लक्षित गरी ठेला पसल सञ्चालनमा ल्याइएको फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीतारम कट्टेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार ठेलामा फलफूल, बदाम, पानी लगायतका वस्तु विक्री गरिएको छ। अब मःम, चाउमिन, चना जस्ता खाद्यवस्तु बिक्री गरिने उनले जानकारी दिए।गत आइतबारबाट ठेला पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सोमबार तीन हजार तीन सय बचत भएको छ।
रङ्गशाला निर्माण सहयोगार्थ भएकाले घुम्न आउने धेरथोर किनेर सहयोग गर्न सुरु गरेका छन्। रङ्गशालाभित्र भ्यू टावरबाट हेर्नका लागि २० को टिकट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकै दिन दुई हजार २ सय जनासम्मले टिकट खरीद गरी रङ्गशालाको अवलोकन गरेका छन्।पछिल्लो समय विद्यार्थी, सहकारी, आमा समूह, टोल विकास समितिलगायतका सङ्घ संस्थाका भ्रमण टोलीको प्रमुख गन्तव्य रङ्गशाला बन्ने गरेको छ। रङ्गशालामा देशका ७७ जिल्लाको अपनत्व हुनेगरी नक्शाङ्कन गरिएको छ। रङ्गशालाको विभिन्न कक्षलाई जिल्लाबाट नामाकरण गरिएको उनले जानकारी दिए।
निर्माणको काम तीव्र भए पनि आर्थिक सङ्कलन भने खासै हुन सकेको छैन।आठ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बोलकबुल भएकोमा एक करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। हालसम्म विभिन्न क्षेत्रबाट बोलकबुलको बाहेक तीन करोड सङ्कलन भएको उनले बताइन्। रङ्ग शाला सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ। यद्यपि श्रमदान र अन्य सामग्रीको सहयोग भएमा त्यति खर्च नलाग्ने फाउण्डेशनले जनाएको छ। रासस